Iyo yakanakisa Linux mini-kugovera | Kubva kuLinux
Mini-distros yezvikwata zvine zviwanikwa zve zvishoma kana zvishoma zvigadzirwa kana simudza OS Kubva paLinux, pane dzakasiyana siyana kusarudza uye kuyedza, pano ini ndinotaura zvimwe.
1 Chii chinonzi Linux mini-kugovera?
Chii chinonzi Linux mini-kugovera?
Iyo Linux mini-kugovera iri musiyano weiyo sisitimu iyo inovavarira kuisa yakakwana yekushandisa sisitimu mune yakaderera-inokwenenzverwa inotakurika ekuchengetedza mayuniti senge floppy disk.
Rudzi urwu rwekugovera runotibvumidza kuti tishande mune ingangoita yakakwana yeLinux nharaunda kutanga kubva padhiropu dhisiki kana kiyi yeUSB uye pasina kushandisa dhisiki rakaomarara iro rinogona kunge riine komputa, nekudaro tichidzivirira chero kupindirana nehurongwa hwakaiswa pakombuta. Uye nekuda kwekushandisa kwayo kwakaderera zviwanikwa, chakanyanya kunetsa kazhinji chiri RAM, icho kazhinji kazhinji chinofanirwa kunge chiri 8 Mb ye RAM, saka ingangoita chero komputa yakanakira kushandiswa kwayo.
Kubasa kushoma: pakati pe1Mb uye 50Mb
Kushandiswa kushoma kwezviwanikwa: 4-8 Mb RAM uye i386 processor
Kushandiswa kwe RAM senzvimbo yefaira: / dev / ram-n
Ivo havawanzo vanoda hard disk:
Ivo vanowanzo bvumira kuti zvishandiso zvibatanidzwe kunetiweki uye zvinosanganisira vatengi uye dzimwe nguva maseva ane masevhisi ekutanga senge ftp, http, telnet kana vamwe
Kuisirwa kubva kuMS-DOS, GNU / Linux, kana pasina chidimbu chehurongwa hwekushandisa, senge LiveCD masisitimu.
Anobatsira ma disks kuwedzera mamwe mashandiro.
Kushandisa RAM semidziyo yekuchengetera kunoita kuti system ikurumidze kushanda, sekuchengetedza mu RAM kuri kukurumidza kupfuura kuchengetera pane chero chinhu. Asi kushandiswa uku ndiko kunowanzo kumanikidza iyo RAM PC kuti ipfuure 4Mb ye RAM, zvikasadaro kushandiswa kweiyo sisitimu hakuna kukanganiswa zvakanyanya. Kunze kwemidziyo yekuchengetera "/ dev / ram-n" ndangariro inodawo kune iyo kernel yeiyo sisitimu yekushandisa uye nezve zvinoshandiswa zvinoshandiswa. Iwo mashiripiti ekushanda pasina rakaomarara dhisiki rakavakirwa pakushandisa RAM sechinotsiva chakaoma dhisiki uye floppy diski.
Iri rinotevera runyorwa rwekuparadzirwa kweLinux kusvina iwo mashoma michina yemazuva ano, mairi zvisingaite kuti unakidzwe ne100% yekuparadzirwa kwazvino, nekuda kwekuganhurirwa kwehardware.
Antomic: Nyowani Debian-yakavakirwa mini-kugoverwa kwevashandisi veavice uye nyore kuisa.
Austrumi: Kumwe kugovera chaiko kwehukuru hushoma, zvisingaite 50MB. Isingafarirwe, asi kwete yemhando yepamusoro. Yakavakirwa, senge yakawanda, paSlackware. Inoshanda zvakanaka paPentium uye gare gare makomputa. Nehanya graphic chimiro, iine Enlightenment.
BasicLinux: Mini kugovera yakanyatsogadzirirwa kugadzirisa 486 kunze kwechikamu. Kubva paSlackware, inomhanya yakananga kubva kufloppy disk uchishandisa RAM.
Brutaware: Mini-kugovera for network management neTCP / IP
Coyote Linux: Variant yeLinux Router Project, inomhanya kubva kune imwe chete floppy disk uye inoshandura iyo yekare PC yawakachengeta muwadhiropu yako kuita router inokwanisa kubatanidza yako yemuno network kuInternet.
Damn Diki Linux: mini kugoverwa mhenyu cd iyo nekuda kweiyo diki saizi, inogona kushanda senge yekununura distro kana kuti ishandiswe mumachina ane mashoma ekugadzirisa simba.
DeLi Linux: Acronym yeDesktop Mwenje Linux, inogona kushanda mushe pane 486 terminals ine 16MB ye RAM. XFree graphical nharaunda inoshanda uye inotorwa kubva kuSlackware.
FloppyFW: Iyi mini-kugovera inokutendera iwe kuti ushandise iyo static router ine firewall inoshanda.
microLINUX_vem: GNU / Linux inodzidzisa mini-kugovera muchiSpanish, mune zvinyorwa modhi, yakarongedzwa pane 1.44 Mbyte floppy diski kana kuitiswa kubva paWindows system hwindo.
MoviX: Yega-inotakurika multimedia mini-kugovera kubva kuCD inotamba marudzi ese eema multimedia mafaera ane MPlayer.
muLinux: Mini-kugovera inogoneka pane hard disk. Icho chimwe chediki diki dzekugovera, inosungirirwa nyore kumakomputa ekare.
Puppy linux: Iko kugovera chaiko, pamwe nemukana wekuiswa pane rakaomarara diski. Inoda RAM diki, uye inowanzo famba mushe pamakomputa ekare. Inopa Fvwm95 uye JWM huviri.
SliTaz Linux: yakagadzirirwa kumhanya pane Hardware ine 128 Mb ye RAM. Inotora 30 Mb CD uye 80 Mb pane dhisiki rakaomarara. Kubva pa16 Mb ye RAM ine iyo JWM hwindo maneja (mune yekubika vhezheni iri LXDE).
Tinyu linux: Mini-dhizaini yakagadzirirwa kushandiswa pamakomputa echinyakare.
Tiny Core Linux: Tiny Core Linux idiki kwazvo (10MB) shoma Linux desktop. Iyo yakavakirwa paLinux 2.6 kernel, BusyBox, diki X, FLTK GUI, uye flwm windows maneja, inomhanya zvakakwana mundangariro.
Tinyme: TinyMe ndeye Linux-based unit mini-kugovera. Iripo kufambisa kuisirwa kweUnited Linux pamakomputa ekare, kupa mashoma kuisirwa kwevanogadzira, uye kupa nekukurumidza kumisikidza kweLinux uko kunongodiwa chete zvakakosha.
Tombsrtbt: Tomsbsrtbt inzira yekukurumidza kununura pane imwechete floppy disk.
Trinux: Mini-kugovera yakanangana nekutungamira uye kuongororwa kwema network.
Linux Vector: Kubva paSlackware, inofanira kushanda zvakanaka ne32MB ye RAM uye 1GB ye hard drive. XFCE / KDE graphical nharaunda, zvinoenderana nenyaya yacho. Pane livecd vhezheni isingade kuiswa.
ZenWalk Linux: Yaimbozivikanwa seMiniSlack, iyi Slackware-yakavakirwa kugovera iri nyore uye yakazara. Yakagadzirirwa komputa inosangana nezvinodiwa zvishoma zvinotevera: Pentium III uye 128 Mb ye RAM.
Yakazara runyorwa rweLinux mini-distros
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Iyo yakanakisa Linux mini-kugovera
Hukuru! kumutsidzira wako wekare muchina
Daniel Soster akadaro
imwe yeakanakisa ndeye TinyCore. Izvo zvinoyemurika kuti rinoziva sei rese Hardware pane iyo inobata uye ine graphical interface uye pamusoro payo ine akasiyana akasiyana akasiyana ezvinyorwa. inoita chero PC kushanda senge nyowani. zvakare pane vhezheni itsva ine WIFI rutsigiro uye neakasiyana graphical interface sarudzo (chete 64mb)
Pindura kuna Daniel Soster
Paco Puig akadaro
Trinux yava kunzi ubuntutrinux uye peji rayo iri http://code.google.com/p/ubuntutrinux/ . Iyo yaunoisa inotungamira kune yepamhepo kasino ...
Pindura Paco Puig
Haha! Ndatenda neruzivo. Kumbundirana! Paul.
Roma esparza akadaro
Vakachengetedza hupenyu hwangu ndatenda ndanga ndichitsvaga chakadai xD
Pindura kuna Roman Esparza
Tsindi mumambure. akadaro
DSL ipombi kunyange ini ndanga ndisingawani nzira yekuisa .UCI chirongwa kana kuwedzera iyo Debian repositories (ndinonzwisisa kuti inogona) ... ini ndakamboita chinyorwa nezvazvo (http://hayardillasenlared.blogspot.com/2011/06/instalar-damn-small-linux-en-el-disco.html)
Pindura Chipmunks pamambure.
Rombo! Ndiri kufara kuti zvinobatsira
Juan jose garces garcia akadaro
Mhoro .. Unokurudzira chero doudoulinux kana chyme maitiro? Ndine mini laptop ine ce uye 128Ram yeane makore mana ekuberekwa…?
Pindura kuna Juan Jose Garces Garcia
Kuda kuziva uye kunakidza!
Ini ndichaedza atomiki kuti ndione kuti chii = wave
kwaziso kwandaida kuziva kuti ndedzipi dzeshanduro idzi dzinobvumira kurekodhi yedesktop
Edwin Morales Z akadaro
Ini ndinowedzera izvi zviviri:
Old Slax, inokutendera kuti iwe ugadzire yako Live-CD.
Nyowani Slax - sarudzo yekugadzira yako Live-CD haisati yatenderwa parizvino.
Pindura Edwin Morales Z